निसानले बुढासुब्बा गोल्डकपको उपाधी बाबालाई समर्पण गरेको क्षण । - Naya Online
निसानले बुढासुब्बा गोल्डकपको उपाधी बाबालाई समर्पण गरेको क्षण ।
सोमवार, फाल्गुन १९, २०७६ (March 2nd, 2020 at 9:58pm ) खेलकुद
‘दाई, दाई मेरो ड्याडीलाई बोलाई दिनु न ।’
यो बोलि कुनै पाटी र बजारको नभई मनाङ मस्र्याङदीले क्लबले उपाधी जितेपछिको हो ।
आðनो सबै खेलाडी अर्को क्लबमा गएनी आðनो विरासतलाई कायम राख्दै २२ औं बुढासुब्बा गोल्डकपको उपाधी मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले चुम्यो । आðनो चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबलाई तीन एकले जित्यो । मनाङका दयानन्द सिंह, निसान लिम्बु र विमल रानाले गोल गरे भने उता पुलिसका भोला सिलवालले पेनाल्टिमा गोल गरे ।
तर जब मनाङले उपाधी चुमीसकेपछि भने खेल मैदान भावुक्तातर्फ मोडियो । माथिको बोलि मनाङ्मा उत्कृष्ट खेल पस्किरहेका निसान लिम्बुको हो । उनले आðनो बाबा बिमल लिम्बुलाई बोलाएर कपसँग फोटो खिचाए । अनि भावुक बने र ‘भने यो जीत र कप मेरो बाबा र मेरा समर्थकहरुलाई समर्पण गर्न चाहन्छु ।’ झण्डै १२÷१३ कि.मी. टाढाबाट आएका उनका क्लबको जर्सी सहितका समर्थकहरुले उनलाई धाप मारे र सो समर्पणलाई ताली बजाएर स्वागत गरे । उनले आðना समर्थकहरुलाई निराश पारेनन् । दोश्रो गोल गरेर आðना समर्थकहरुलाई उनले खुशी दिलाएका थिए । उनका बुबा बिमल लिम्बु पनि आðनो छोरा निसान प्रति गर्व गरे । उनका बुबाले फुटबलमा भविष्य छैन, यो खेलेर उभो लाग्न सकिदैन बरु केही गर भनेको कुरा निसानले खुब सम्झे । तर पछि राम्रो खेल्दै गएपछि नजिकैको बुढासुब्बा गोल्ड कप खेलेको हेर्ने सपना मात्र बोकेका थिए तर गोल्ड कप नै जित्दा कुन बुवा खुशी नहोला ? निसान र अनि उनका समर्थकहरु पनि निसानले एक पल्ट बुढासुब्बा गोल्डकप खेल्ने र खेलेको हेर्ने सपना बोकेका थिए । कुनै बेला मनाङ र थ्रीस्टारको गेम दर्षक बनेर हेर्थे तर २२ औं बुढासुब्बा गोल्डकपमा आफु मैदानमा सबैको आकर्षण बन्दै उपाधी चुमे त्यो पनि नेपालकै प्रतिष्ठित क्लब मनाङबाट । यो सम्झदा उनी साँच्चै भावुक बने । र सबै आðना ðयानहरुलाई पुनः धन्यवाद दिए ।
यो भन्दा अघि उत्कृष्ट खेलाडीको व्यक्तिगत पुरस्कार स्कुटी लिदा सुरज वि.क.ले आðनी आमासँगै फोटो खिचाउँदा पनि सो समारोेह भावविह्वल बनेको थियो । सुरजको आमा छोराको पुरस्कार आफुले थाप्दा गहभरि आँशु जमाइन् सुरजको आमाले त मनाङका कोच, अफिसियल, खेलाडी तथा भेटेजतिका मनाङका सबै समर्थकलाई आशिर्वाद दिन भ्याए । सो दृष्यले धेरैको मन छोएको थियो ।
कोरोनाविरुद्ध आत्मबल मिलोस् भन्दै ६० मिटर गहिराईमा जलयात्रा
काठमाडौं, ९ मे । नेपालका पूर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी पवन तेयुङ लिम्बूले शनिबार ‘कोरोना...
‘दाई, दाई मेरो ड्याडीलाई बोलाई दिनु न ।’ यो बोलि कुनै पाटी र बजारको...
हङकङसँग नेपाल पराजित, नेपालको लगातार दोस्रो हार
थाइल्यान्डमा जारी एसिसी इस्टर्न रिजन पुरुष टी-२० क्रिकेटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार ब्यहोरेको छ।...
नेपालको कीर्तिमानी, अमेरिकामाथि जित
काठमाडौं। काठमाडौंमा बुधबार सम्पन्न आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग–२ को त्रिकोणीय श्रृंखलाको अन्तिम खेलमा नेपालले...
जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको ५२ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न
महामारी जितेर मृत्यु हारेको एउटा सांगीतिक सतिसालप्रति…